North-Caucasus waziwa emhlabeni wonke ngoba ski yayo emizileni, zokungcebeleka ebabazekayo, Amazing bemvelo wokwamukela izihambi womnini-bendawo. Namuhla sizogxila Elbrus - indawo emangalisayo futhi amazing e Kabardino-Balkaria. Izigidi izintaba abathanda ubuthe Elbrus ehlobo. Nethezeka emithambekeni olunothile ezintabeni ngeke abashiye ubani nandaba.
Insimu Kabardino-Balkaria iye owakhiwe kusukela ezikhathini zasendulo, futhi phakathi nekhulu le-16 baba yingxenye Russia. Ngalesi sikhathi, u-Ivan Grozny wayeshade indodakazi Kabardian isikhulu, namanje lizimelele ubudlelwane yaseRussia republic Caucasian. Ekhulwini le-19, uhlobo Kabardino-Balkaria nesithakazelo izivakashi abaningi bezinye izizwe. Kwakuphakathi nalesi sikhathi, ukunqotshwa kokuqala kunezintaba eziphakeme kunazo zonke ye-North eCaucasus - Elbrus, emithambekeni lapho Republic sisalokhu. Kusukela Kuleli qophelo embhalweni Elbrus esifundeni waqala ukuthuthukisa ekhuphuka, futhi phakathi nekhulu lama-20 kusukela izivakashi kwakungekho isikhathi somthetho wewashi. Ingxenye yekhulu lama-20 yesibili kwaphawulwa nokwakhiwa kwemigwaqo e-Baksan Valley, amahhotela, ukuzijabulisa izikhungo kanye ikhebula izimoto. Lapha, Kabardino-Balkaria, yayakhiwe chairlift obuphelele lokuqala waseRussia amamitha angaphezu kuka-1500.
Yini ungabona ku Elbrus esifundeni?
Uma fan of yokuchitha isizungu asebenzayo, kufanele nakanjani vakashela Elbrus ehlobo. Phumula, okuyinto Ukubuyekeza ezihlongozwayo ngezansi - kungcono izikhathi emangalisayo elikhanyayo. ubuhle emangalisa landscape yemvelo, ehlanzekile emoyeni entabeni, uhambo eduze oyinyoka, obumangalisayo, ukugibela Elbrus ku ikhebuli imoto yesimanje - konke lokhu balindelwe nawe kule ndawo enhle kangaka.
Elbrus - entabeni eziphakeme eRussia nase-Europe. Nge kwaqala lasendulo exhumene yetinsita enhle. Kwasukasukela wahlala zaseCaucasia emathafeni isizwe Narts. Umholi wabo wayeyinkosi eyiqhawe elinesibindi omkhulu Elbrus, futhi wazala indodana - a Beshtau abanesibindi futhi abanesibindi handsome. ukuphila Carefree agelezé indodana ka umholi - ukuzijabulisa nabangani, ukuzingela, ukudoba, wenhlanganyelo nemvelo. Ingabe-ke isipho engavamile - ukuqonda ulimi izilwane. Uma Beshtau nenye intokazi evela isizwe angomakhelwane - Mashuk ubuhle futhi sathandana naye. Ngaphandle kokunqikaza, le nsizwa yaya kuyise yabatshela lomshado okuseduze. Kodwa akajabuli Elbrus, ngoba Yangihlaba umxhwele ubuhle Mashuk abasha. Wabe kuhlelwe ukuqeda indodana imbangi futhi wathumela ukuba alwe ngesibhamu i-isizwe elingumakhelwane, nginethemba lokuthi ayiwubuyisanga uyaphila Beshtau.
Long engekho iqhawe abasha, futhi Elbrus Mashuk wathonyelwa ukuba ngishade naye. Nokho Beshtau ngasinda wabuya ngobusuku obubodwa kule ndawo yakubo. Abangane bakhe - izilwane ibhubesi, inkomo, inyoka nelithi ikamela watshela ngokukhohlisa kayise. Beshtau bathunjwa othandekayo futhi wanquma ukubaleka, kodwa ababambanga up Elbrus. Ubaba nendodana waya kulwa nomunye. Beshtau ephakanyiswe inkemba yakhe ikhanda likayise. Kodwa hhayi ngokushesha wabulala Elbrus, esekhokha amandla okubhekana akhe okugcina ngokuqondene usike indodana izingxenye ezinhlanu. Mashuk hhayi wahlupheka sizi, wamonyuka angababulali yakhe futhi wabulala yena. Konke ungenayo kusukela le mpi esabekayo futhi eyesabekayo. Futhi kusukela ngaleso sikhathi, emi kusayithi kweNtaba Elbrus, Mashuk futhi Beshtau.
Namuhla, izigidi zabantu abavela kuzo zonke emhlabeni jikelele ukuza zibabaza ubuhle lezi zidlakela zemvelo. Sikumema ukuba ahlele iholide lakho elaliphansi kwamagquma kweNtaba Elbrus ehlobo. Amanani emahhotela zendawo amathilomu uzobe umangale. Kuhlala ekhatsi amahhotela - ruble 350 ngosuku emakamelweni ekilasini umnotho. Okuningi ukhululekile amafulethi okunethezeka - ruble 1500-2000. Abantu bendawo ukunikela izitsha of cuisine kazwelonke. Isidlo ephelele izobiza ruble 500-800 umuntu ngamunye.
igama Valley liyazikhulumela --20 imithombo lamanzi esiphethu ziyashaywa emhlabathini. Ndinyana Narzanov Valley olunothile kakhulu. Indawo ivaliwe nxazonke by ezintabeni eziphakemeyo, ngoba lokhu kudala isimo zobumfihlo okungavamile. Lapha, eduze imithombo yamanzi amtoti yemvelo - amathilomu encane, ekhaya eliqoshiwe lezizwe ezihlukahlukene. Lapha izivakashi zingathola lokuphuza cuisine ukulandelana kwamakhosi ezizwe ezihlukahlukene. Uma uvakashela Elbrus ehlobo iholide lakho kumelwe nakanjani ziqale Ukuvakashela Narzanov.
Baksan Gorge - indawo emangalisayo enhle futhi ethandwa. Kukho konke esigodini umgwaqo asphalt, okuyinto liphuma khona kweNtaba Elbrus at 2000 amamitha. Lapha eponymous entabeni umfula ugeleza khona. Zithi uma amanzi omfula kwaba lihlanzekile ukuze lingaphuzwa. Njengamanje, ungcolile kakhulu. esigodini esihle ikakhulukazi ngenkathi efudumele, lapho konke emhlabeni oluhlaza futhi komhosha begijima phansi nge ukubhonga okukhulu. Thina ukweluleka wena ukuza Elbrus ehlobo. Phumula (amahhotela ivezwa lapha uhla ebanzi) uzagcwala izinkumbulo ezimnandi. Amahhotela ethandwa kakhulu ezivakashini - "Balkaria", "Scheherazade," "Azau".
Nabasunguli Elbrus: ezikhumbuzo
Sanquma ukuthatha iholidi in the Elbrus esifundeni ehlobo? Amaholide uqale nge isingeniso izikhumbuzo abanqobi lokuqala entabeni eziphakeme eRussia, okuyinto efakwe ngqo unyawo lwayo. Ngo-1829, izakhamuzi Kabardino-Balkaria Hilaire Khachirov futhi Ahia Sottayev wenza emqansweni lokuqala esiqongweni sentaba. Lolu hambo, zazo beniyingxenye babegqoka abantu 20. Njengoba lisendaweni ephakeme 4270 amamitha, kwanqunywa ukuba ayeke emqansweni iqiniso lokuthi iningi lamalungu bomkhankaso waqala zekhanda ezinamandla. Hilaire Khachirov wenqaba ukubuyela bese uqhubeke ukunyukela wedwa. Wakwazi ukuthola izincwadi kuya phezulu, futhi kunobufakazi ifulege kwesokunxele bese cap sakhe.
Umgwaqo ezinyaweni Elbrus kuholela ngokusebenzisa "edolobheni bayafa" Tyrnyauz. Ngaphambi kokuwa eU.SSR kwakukhona abantu abahlala owayesebenza isitshalo zendawo for the isizinda namaminerali. Ngemva kokuvalwa sabantu isitshalo kwehle ngokuphawulekayo. Okwamanje, idolobha cishe akekho ekhaya. Itholakala esingavamile kakhulu, indawo olunothile. Endleleni bashiya eliphezulu liphumele izakhiwo, kanye yesokudla kubo avuke ezintabeni.
Le ndawo idumile phakathi izivakashi hhayi kuphela ebusika kodwa ehlobo. Phakathi ehlobo main Izibuyekezo ukuzijabulisa wazi izizinda ephelezelwa iziqondiso abanolwazi, ogibele ihhashi, ibhayisikili isikwele nokunye okuningi. Noma yimuphi izivakashi kuyogxilisa Elbrus ehlobo. Phumula, ukubuyekezwa ezithinta abahambi onolwazi emihle kakhulu, kuyoba mnandi futhi egcwele okuvelayo. Izivakashi ukusho iyindawo engcono kunazo zonke emhlabeni!
Kuchugury emzaneni. Ukubukezwa lover Azov Sea
Iris eSiberia: incazelo jikelele, izimo ezikhulayo, futhi ukusetshenziswa
Indlela mncane igazi emzimbeni?
I-Chain ibone - ithuluzi elizenzekelayo